Jack Welch waa Qalad | Martech Zone
Aad ayaan ugu faraxsanahay inaan ugu dambeyntii arko article taas oo su'aalo ka keenta qaababka uu Jack Welch u faafinayo Waxaan aaminsanahay inuu yahay mid aan ka fiirsan, macangag ah, danaysi iyo hunguri weyn. Wuxuu kaliya ku guuleystey samaynta macaamiisha iyo shaqaalaha dhib. Isaga kaliya ayaa laga yaabaa inuu guuleysto, laakiin waxay ku kacday kharashka kuwa kale oo badan oo laga badiyay.
Waxaan caawa u kaxeynayay gurigeyga oo aan ka fekerayay goortii aan ka shaqeynayay Isgaarsiinta Landmark. Waxaan ku faraxsanahay la kulanka Frank Batten Sr. intii aan ku jiray tababarka qaar ka mid ah hogaaminta shirkadaha. Qof ayaa weydiiyay Mr. Batten, "Immisa ayaa ku filan?". Mudane Batten xitaa kuma uusan leexan su'aasha. Wuxuu si fudud u yidhi hadday lacagta ku saabsan tahay, waa hore ayuu tagi lahaa. Ma xasuusto ereyadiisii ​​saxda ahaa, laakiin wuxuu yiri farxaddiisa hadda waxaa laga helay xaqiiqda ah in dadka waaweyn ee uu shaqaaleeyay iyo shirkadda ay dhisteen ay ka shaqeeyaan kumanaan qoys. Diiraddiisu waxay ahayd inuu sii wado kala-duwanaanta shirkadda iyo ballaadhinta si ay shirkaddu u sii wado inay taageerto dad aad u tiro badan.
Mudane Batten hadda waa howlgab laakiin fekerkiisu had iyo jeer wuu ila sii joogay. Ujeeddooyinkiisu waxay ahaayeen inuu isagu ka fikiray 'Guul' inuu shaqaaleeyo dadka ugu fiican, dhisida wax soo saarka ugu fiican, iyo ballaadhinta ganacsiga si loo xaqiijiyo guusha muddada dheer Dad badan ayaa 'guuleysanaya' aragtida Frank Batten darteed. Waxaan ka tagay Landmark 7 sano ka hor… waxaana sii wadaa 'Win' sababta oo ah sida ay iila dhaqmeen Mr. Batten iyo Landmark.
Xaqiiqdu waxay tahay, uma wici kartid 'Guul' ilaa ay kooxdaada oo dhami kula dabaaldegaan. Way kaa caawiyeen inaad halkaas tagto waxayna mudan yihiin gabal ka mid ah sumcadda, iyo sidoo kale qayb ka mid ah abaalmarinta. Dabcan waxaad qatar galisay oo aad maal gashatay shaqooyinkooda - taasi waxay ka dhigan tahay inay dantaada ugu fiican tahay inaad iyaga ilaaliso oo aad ixtiraamto. Haddii ay tahay inaan ka walwalo helitaanka warqad casaan ah maxaa yeelay qiimaha saamigu wuu sii dhacayay, ma waxaad u malaynaysaa inaan qalbigayga gelin doono shaqadayda? Taasi waa waxa aan u aragno inay ku dhacayaan ganacsiyada ay gorgorradani ku tukanayaan. Waa wax aan macquul ahayn.
Kudos maqaalka! Waa waqtigii qof istaagay!
Immisa idinka mid ah ayaa garanaya cidda uu yahay Jack Welsh? Weligaa ma maqashay Frank Batten Sr? Waxbaa ka qaldan taas, miyaanay jirin?
Tags: bilyaneerbaydh macaanjack welchcalaamaddaku guuleystay
Baahiyaha Feejignaanta Suuqgeyntu WAY Kordhinayaan, mana Yaraanayaan